Ngazi kanjani le amathikithi omgwaqo? Wazi kanjani amagama amathikithi omgwaqo?
Namuhla e-Russia kukhona eziningi ezikhethekile komgwaqo amakhamera, wahlela ukulawula ukwephula abashayeli ezihlukahlukene izindawo. Kanjalo-ke, ukuze kube ukuvela bamangale we okuthiwa "uchungechunge izinhlamvu" inhlawulo engakhokhiwe, kungcono kusengaphambili ukuhlola ukuthi une izikweletu ezingakhokhiwe. Okusanda wathola ezingakhokhwanga omgwaqo (State Traffic Safety Inspectorate) okuye kwafezwa ngokusebenzisa World Wide inethiwekhi Web. Futhi okubaluleke - ukulawula izikweletu ngokuphelele khulula, nganoma isiphi isikhathi sosuku. Ngazi kanjani traffic amaphoyisa izinhlawulo ngokusebenzisa i-Internet? Impendulo yalo mbuzo, uzofunda kusuka sihloko namuhla yethu.
Izinketho nokuhlinzekwa kolwazi
Kuphi ukuze ufunde mayelana omgwaqo? Kunezindlela eziningana ukuze uthole izikweletu:
Ngokusebenzisa ekhethekile iwebhusayithi, noma lapho iSMS umyalezo ovela yakho yefoni yeselula.
Izinzuzo yokugcina izindlela ezimbili azikwazi babenesibindi esikhulu. Phela, ukufunda ngazo zonke izikweletu unga ngaphandle kokushiya indlu. Ngaphezu kwalokho, ungabheka lolu lwazi, ngisho ngokusebenzisa ifoni, bese ulandela yonke izinhlawulo kungaba cishe noma nini. Njengoba ngibheka Imininingwane nge-Internet, kukhona omunye izinzuzo main wukuthi idatha isheke nhlobo, futhi nganoma isiphi isikhathi sosuku. Kuyefana nasendleleni inkokhelo, okuyinto engenziwa nge efanayo inthanethi. Uma une-computer noma i-laptop ne ukufinyelela World Wide Web awudingi ukuya amaphoyisa omgwaqo kanye emgqeni ukuze ufunde mayelana inhlawulo yabo. Lokhu kusindisa kakhulu isikhathi sakho siqu. By the way, ulwazi ngokwalo ngemva kokugcwalisa UD futhi CU inombolo uboniswa ngemva kwemizuzwana embalwa. Ngokuvamile, ukusetshenziswa le sevisi elula kakhulu.
Izinhlawulo ebantfu umnikazi imoto
Ngaphambi kokucabangela izindlela ukuhlola izikweletu nge-Internet, nje uqaphele ukuthi inhlawulo amaphoyisa omgwaqo ukwazi ngegama akunakwenzeka. Futhi kungakhathaliseki ukuthi izihloko eziningi ngale ndaba asishicilelwa, isiphetho esisodwa kuphela - thola ulwazi olunembile on izikweletu kungaba kuphela ngemuva nezinombolo zelayisensi somshayeli (i-ID). Lokhu kungenxa yokuthi igama Indoda ingaziwa embuthanweni ebanzi abantu, futhi ufunde mayelana inhlawulo ingafunda cishe njalo amaziyo, noma ungumfokazi. Yingakho injongo imfihlo ufunde inhlawulo ezingakhokhwanga ngegama akunakwenzeka.
Ngazi kanjani inhlawulo amaphoyisa omgwaqo ngokusebenzisa i-Internet?
Futhi manje mayelana nendlela ungakwazi ukulawula zonke izikweletu zakho ngaphandle kokushiya ekhaya lakho. Ukuze usebenzise le sevisi, udinga ukuya website "Inhlawulo traffic amaphoyisa» - moishtrafi noma shtrafy-gibdd (zokugcina sizobheka kabanzi), esinikela abashayeli ulwazi olungenaphutha ngemithi zonke izikweletu.
Design kusayithi bakudala kakhulu, ngakho ukuyisebenzisa kalula futhi sizikhandle. Okokuqala, ukuthola izikweletu izinhlawulo, kumele ubhalise. Inqubo ngeke bathathe kuwe imizuzu engaphezu kuka-5, ukuba okufanayo esikhathini esizayo ngeke kudingeke ukuba ubhalise. Ngakho, emnyango iKhabhinethi wakho siqu phambi uzobe ikhasi eliyinhloko site, lapho kukhona amasimu ukugcwalisa. Lapha kumele faka inombolo kwelayisensi imoto isitifiketi sokubhalisa umshayeli sakho ku-ejenti. Ngemuva kokuthi uchofoze "Hlola izinhlawulo" emizuzwaneni embalwa uzofunda zonke izikweletu. Kufanele kuqashelwe ukuthi ulwazi izoboniswa kuphela emva idatha ilayisensi futhi imoto izinombolo yokushayela kuyoba iyafana negama lomnikazi wenkampani, okungukuthi, ukuthi ubani imoto ebhaliswe. Ngakho, ukuze uthole ukuthi umphathi wakho noma umakhelwane zikhokhelwa amaphoyisa omgwaqo, ungenawo aphumelele, ngoba le sevisi kuyimfihlo.
Isayithi "amathikithi omgwaqo" futhi iphuzu imithetho, elibonisa lonke ulwazi mayelana imithetho yemigwaqo nezindlela zokuzivikela. Ngemva ukwethulwa nezinombolo zelayisensi yokushayela futhi imoto yakho yokubhalisa ipuleti, ungacindezela inkinobho njengoba isithombe nge iphrinta futhi uzitholele irisidi yokukhokha kwakhe ebhange.
Izaziso Insizakalo ye-SMS
Ukuze uthole ukuthi amaphoyisa amathikithi omgwaqo abe egameni lakho, futhi unga ngokusebenzisa ifoni. Ukuze wenze lokhu, thumela umlayezo nge umbhalo:
Inombolo ye-ID amaphoyisa Traffic imoto ilayisensi yokushayela
Futhi ulithumele inombolo 9112.
Ukuze usebenzise le sevisi, futhi, silula, kodwa yinye ethile, ngenxa lapho abanikazi abaningi imoto uncamela ukusebenzisa i-Inthanethi. Imali okuhlinzeka kwaziswa ruble 10, futhi kuwukuhlakanipha ukuba uvakashela isayithi futhi uzitholele irisidi efanayo yokukhokha.
By the way, ungakwazi ukukhokha isikweleti ngisho ngaphandle le irisidi, kodwa umane kusayithi efanayo. Akubalulekile ukuya ebhange noma amaphoyisa omgwaqo. Imininingwane engeziwe mayelana nalokhu utawufaka ngawo kulesi sigaba esilandelayo.
Kanjani ukuze wenze inkokhelo i-Internet?
Ukuze angabuyisela izikweletu, udinga i-akhawunti nge omunye izinhlelo yokukhokha ngomshini noma ikhadi lasebhange. Kukhona indlela yokukhokhela nefoni yakho ephathekayo, kodwa kukhona ikhomishini ehloniphekile, ngakho udinga ukukhetha phakathi zokuqala ezimbili izinketho. Ngakho kanjani ngikhokhele? Ekhasini isihloko indawo udinga ukuya traffic kwesigaba amaphoyisa bese ukhetha "Ulwazi lokuxhumana". Khona-ke ukuvula ithebhu "DPS Division Group for kusetjentiswa kwemtsetfo zokuphatha", khetha esifundeni sakho futhi iyunithi kwesokudla. Ngemva kokugcwalisa lonke ulwazi olufanele wena izoveza imininingwane yokukhokha inhlawulo.
Isimiso buyiselo amasistimu ezihlukahlukene yokukhokha iyafana, ngakho ngezansi sibheka indlela yokukhokha ethandwa kakhulu - ngokusebenzisa ikhadi yasebhange. Okufanele ukwenze lapha? Okokuqala, uye kuwebhusayithi esemthethweni ebhange bese ukhetha ithebhu "Izinkokhelo". Cishe kuwo wonke amasayithi yasebhange kukhona into "Ukukhokhwa omgwaqo." Wasitshela nje kudingeka. Uma le thebhu alikho, kuzodingeka ukuba ukhethe yokukhokha imininingwane ngokungenasizathu bese ukhetha ukhombise idatha yokukhokha. Ngemva kokugcwalisa emigqeni edingekayo yesikweletu bazokhokhelwa ngempumelelo.
Siphawula iphuzu esisodwa esibalulekile: uma ukhokha nenhlawulo ngokusebenzisa ikhadi lasebhange kusengaphambili Hlola Igama lomnikazi we imoto le-akhawunti umnikazi ikhadi. lomnikazi we-akhawunti igama kumele umdlalo igama umshini umnikazi. Kungenjalo, emihle Ngeke kukhokhelwe. Njengoba "umbhedo" okungukuthi ngokuvamile abami yilabo isifiso ukudluliswa imali WM-akhawunti ebhange ikhadi. Futhi lapha nalaphaya kudingeka ngempela "ukulungisa" ikhadi lasebhange.
Uma ufuna ukwazi khona traffic amaphoyisa izinhlawulo egameni lakho nge-internet, khumbula ukuthi le sevisi inikezwa kuphela 8 izifunda of Russia. Lokhu laseStavropol, Krasnodar Territory, Republic of Adygea, eVoronezh Lipetsk, Tambov, Ryazan futhi Tula izifunda. Kuze 2010 ukuze ufunde mayelana inhlawulo nge-Internet ubengase 4 izifunda. Ngokusekelwe kulezi izibalo, eminyakeni embalwa, futhi mhlawumbe izinyanga, kufanele silindele ukuthi maduze ufunde mayelana izikweletu kungaba ingxenye enkulu Russian Federation, futhi kuba ngokuphelele free.
Njengoba siphawulile ekuqaleni kwalesi sihloko, funda imoto yamaphoyisa omgwaqo ngegama lomuntu ukuthi ungumnikazi Insimu Russian Federation akunakwenzeka. Abashayeli abawazi lokhu ehilelekile, ngokuvamile bakhala ngenxa imikhonyovu lolo okusolwa ukuthi wathembisa ukunikeza ulwazi izikweletu kuphela ilungiselelo lomkhaya. Yiqiniso, konke lokhu akuyona mahhala. Yingakho kufanele ukhumbule njalo ukuthi izinga ezimweni ezinjalo kukhona indawo "inhlawulo wami" futhi nenombolo imoto, afake nesitifiketi, emva kusungulwa okuyinto nakanjani free ukuthola mayelana zonke izikweletu.
Ngazi kanjani inhlawulo amaphoyisa omgwaqo yisinqumo? On isikhathi sokukhokha
akufanele alibale lokukhokha, njengezimisiwe, uzokhokhiswa inhlawulo, okwakuyoholela ukwandisa inani eside kakade ezikweletini. Lapho ukuthi awukwazi ukwenza sokukhokhwa izikweletu induduzo ekhaya ngokusebenzisa ikhadi lasebhange noma izindlela zokukhokhelana "WebMoney".
Ngakho, thina esiphethweni kanjani ukufunda nokuthi omgwaqo ukukhokha uma izikweletu. Ekugcineni, siphawula ukuthi senkokhelo ngasekupheleni ezikweletini ekhona kungaholela isigebengu icala excitation nge yonke imiphumela yaso. Ngakho ingangqubuzani imithetho yomgwaqo lapho isheke inhlawulo inthanethi!
Inqubo Exchange yephasiphothi eneminyaka engu-20 no-45 iminyaka
Luhlolo wezomthetho izenzo zomthetho: umqondo, izifundo kanye nezinhlobo. Le ndlela yokwenza luhlolo wezomthetho izenzo zomthetho normative
Benz M-Class - Ukucaciswa kanye nokubuyekeza of the abanikazi
Ubunjalo izingane. Izici uhlamvu wengane
Izingxenye isibindi. Sakhiwo umsebenzi kwesibindi
Imephu "Molodezhnaya" (Sberbank): izici, izimo zokuthola, ukubuyekezwa
Yini izimpawu nge-ovulation kuyizinto ezivamile?
Bondarenko Igor: biography, imisebenzi yombhalo kanye nezenhlalakahle
Ihhotela Dessole Blue Star Crete 4 * (Greece / Crete ku.): Ifotho nokubuyekeza